> Resource > iPad > iPad Video Player: Watch Videos on iPad aan diinta
Haddii aad u neceb diinta videos in MP4 ama M4V in iPad natively ciyaari karo, waa dhab fikrad aad u fiican si ay u isticmaalaan ah video ciyaaryahan iPad kuu ogolaanaya inaad u ciyaaro wax ku dhowaad video on iPad, oo ay ku jiraan iPad qaabab aqlka video sida AVI, DviX, Xvid, MKV , wmv iwm Hoos, waxaan soo bandhigi doonaa saddex sooc iPad video ciyaartoyda.
VLC waa ugu fiican iPad video ciyaaryahan oo aan la kulmay si ay u daawadaan ugu files qaab video toos ah iPad aan diinta. Waxaa wax laga xumaado, VLC ayaa laga saaray AppStore by Apple, ay sabab u tahay nooc ka mid ah isku khilaafeen. Si kastaba ha ahaatee, waxaad heli kartaa VLC mar labaad ku ansixiyo jailbreaking aad iPad.
FlexPlayer waa iPad video ciyaaryahan xor ah, taas oo ay taageertaa AVI, DivX, Xvid, VOB iwm Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira qaar ka mid ah khasaaraha. Waxaa si joogto ah bidbidayaan. Mararka qaarkood, (isticmaala qaar ka mid ah ka cawday in) app this ma taageeri qaabab qaar ka mid ah si aad u wanaagsan sida FLV, iyo wax noqdaan xitaa ka sii daran marka la casriyeeyay si version hadda.
YXPlayer taageertaa AVI, DivX, Xvid, wmv, H.264 iwm Waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan $ 5 waxay u. Waxa ay u muuqataa in ay app weyn si aad u ciyaaro videos on iPad, laakiin inta badan dib u eegista ayaa sheegay in nuugayo, haya'ad audio mararka unlistenable iyo ordaya ugu badnaan aa ah 15 looxyada halkii labaad ee video.
Dhab ahaantii, ma jiro runtii suuqa hadda raali galin lahayd dadka isticmaala. Dadka intooda ugu badan, oo ay u doonayaan in loogu badalo videos for iPad kaliya sababtoo ah waa waqti lumis iyo waxay yarayn doontaa tayada. Waa hagaag, waxa haddii ay jiraan waa hab si loogu badalo wax video degdeg aalladda-degdeg ah iyo u tayo khasaaro? Waxaa soo baxday jiro. Software waxaa lagu magacaabaa Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ).
Ka sokow diinta videos la 30X dhakhso xawaaraha diinta iyo wax khasaare ah oo tayo leh wax, app this mar walba ka shaqeeya si joogto ah, si sahlan, oo wax ku ool ah (marka la barbar dhigo saddexda iPad video ciyaartoyda kor ku xusan).
1 Download, rakibi oo ay maamulaan video Converter this
Waxaad ka heli kartaa labada Mac iyo Windows version of app this adigoo gujinaya xiriirka hoose. Ka dib markii in, ku rakibi iyo waxa maamula.
Fiiro gaar ah: Hagaha hoos ku qoran inta badan waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Dabcan, hagaha dadka isticmaala Mac 'waa caadi ahayn la mid ah, waxa uu. Dadka isticmaala Mac, haddii u baahan, waxaad kaloo ka eegi kartaa halkan: ku hanuunin Video Converter u Mac .
2 dar videos in video Converter this
Si aad u samayn, u tag "Beddelaan" tab> "Add Files" button xitaa your computer disk adag tahay in ay doortaan video files aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan. App Tani weyn taageertaa howlgal jiitaa-dhibic oo Dufcaddii diinta, si aad kale oo jiidi karaan hal ama dhowr video files barnaamijka halkii. Ogow in tirada hawsha caadiga ah waa shan iyo tirada hawsha ugu badnaan waa 10.
3 Dooro qaab saarka haboon iPad
Waxaa jira dhamaan noocyada iPad caanka ah ee liiska qaabka wax soo saarka this app ee, sida iPad asalka, iPad 2, iPad cusub, iPad Air, iPad mini. Waad u xaqiijiyay in la helo presetting la filaayo in aad model iPad halkan.
Hit qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, ka dibna riix badhanka hoos-fallaadhiina waxay xitaa dhamaan noocyada qalabka. Just dooro adiga kuu gaar ah model iPad.
Riix ah "Beddelaan" button ee dhinaca midigta hoose ee this Video Converter ee interface ka si loogu badalo video files for loo maqli on your iPad. Markii diinta ka ay ka badan tahay, in aad qalabka wareejin karaan faylasha wax soo saarka via u hagaagsan Lugood. Waxaad ka heli doontaa adiga oo iPad si guul ah lagu ogaan karaa files warbaahinta iyo iyaga habsami u ciyaaro.